ကွန်ပျုတာအင်တာနက်သုံးရင်လေးလို့ပါ(မသ&#41 — MYSTERY ZILLION
ကွန်ပျုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်နေပြီး အင်တာနက်သုံးရင် လေးနေလို့ပါခင်ဗျာ
System 32 မပေါ်သေးပါဘူး
command prompt ရိုက်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းပြန်ပါခင်ဗျာ ( မရ ရအောင်လည်း ဖြေရှင်းပေးခင်ဗျာ)
not clear what virus attack ur computer
So, i want to suggest easily way is go to disk clean up and disk defragmenter
Folder Options ပေါ်သေးလား??
ကျနော့် စက်ကို အင်တာနက်ချိတ်တုန်းကတော့ Svchost.exe ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်သွားလို့ အဲလိုတော့ ဖြစ်ဖူးပါတယ်ဗျာ ... ksapersky antivirus ကိုသုံးကြည့်ပါ ကျနော့်တုန်းကတော့ ဟဲဟဲ
format ပြန်လုပ်ပစ်လိုက်မိတယ်ဗျ... :P:P
Virus တွေ့တိုင်း format သာလိုက်ရိုက်မယ် ဆိုရင် အချိန်ကုန် ၊ လူပင်းပန်းမှာ ပေါ့။
အရေးကြီးတဲ့ Data မရှိရင် ပြဿနာ မဖြစ်ပေမယ့်......တကယ်လို့ Data က အရမ်းအရေးတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ Data Lose ဖြစ်ပြီပေါ့။
Virus ပြဿနာ က သိပ်မကြီး ရင် Anti-virus software သူံးရုံနှင့် ရပါတယ်။
Anti-Virus Software ကိုလည်း လက်ရှိ Virus တွေကို အကောင်းဆုံးရှင်းပေးနိုင်တာ ဘယ် Software ဆိုတာကိုတော့ စုံစမ်းပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့။
တချို့ Virus ကို Software က မနိုင်တဲ့အခါ Virus နာမည် ကို သိအောင်လုပ်ပြီး သတ်ရပါတယ်။
Software နဲ့ မနိုင်ရင် Manual ပေါ့။
ကွန်ပျုတာမှာ ဘယ်လို ပြဿနာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ အသေးစိတ် ကို ပြန်ရေးပေးရင် MZ က ညီ အကို တွေက ၀ိုင်း၀န်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျုတာ လေးတာက သမရိုးကျ Maintain မလုပ်တာကြာလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို ၊ Spyware နဲ့ Virus ပြဿနာလို့ လည်းယူဆ လို့ရတယ်။
မိမိ ကွန်ပျုတာ ကို သေချာအောင်ပြန်လည် စစ်ဆေးပေးပါအုန်း။
Virus တွေ့တိုင်း format ရိုက်ရန်မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။
ကွန်ပျူတာမှာ virus ၀င်မ၀င် သေချာသိရအောင်လို့ ဒါလေးတွေဖြေပေးပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ folderoptions ပေါ်မပေါ်။ (Start>Run>explorer>Tools>folderoptions)
Task Manager ခေါ်လို့ရမရ။ (Start>Run>taskmgr)
msconfig ခေါ်လို့ရမရ။ (Start>Run>msconfig)
ပြီးတော့ registry ကိုလည်းဖွင့်လို့ရမရသိချင်ပါတယ်။
:106: ရှယ်အကြံပြုချက်အတွက် ရှယ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။:39:
Task Manager ခေါ်လို့ရတယ်
registry ကိုတော့ မဖွင့်တတ်ဘူးဗျ
reply ပြန်တာနောက်ကျတဲ့ အတွက် သည်းခံတော်မူပါ
folder option , task manager , msconfig ပေါ်သေးပါတယ်
:77:virus ကို manual သတ်နည်းပြောပြပါလား ခင်ဗျာ:77:
folder option,task manager, msconfig ပေါ်ပါတယ်
registry တော့မဖွင့်တတ်ဘူး ခင်ဗျ
kaspersky ကမရတော့ပါဘူး (update လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူး)
virus manaul သတ်နည်းပြောပြပါလားခင်ဗျာ
:77:MZ မှ ညီအစ်ကိုအားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်:77::77::77::77::77::77:
အင်းးး အခုထက်ထိ ဘာဖြစ်မှန်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးဗျာ။ ဘာဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ခံထားရလဲဆိုတာ အရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားပေးပါလား။ အခုတော့ ဘယ်လိုအကြံပေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်မရှာတတ်ဘူးဆိုရင်တောင် C:\_window အောက်က ဖိုင်ရယ် taskmgr ခေါ်ပြီး process ရယ်ကို screen shot ဖမ်းပြီးတင်ပေးပါလားဗျ။
registry ကိုတော့ မဖွင့်တတ်ဘူးဗျ :1:
အစ်ကိုရေ မေးရမှာတောင် အားနာပါတယ်
အနော် screen shot မဖမ်းတတ်ဘူးဗျ
Screen shot ဖမ်းပုံလေးက ကိုယ် လိုချင်တဲ့ Screen ကိုဖွင့်ပြီး Alt + Print Screen ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကို တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Accessories ထဲက Paint ကို ဖွင့်လိုက်နော်။ အဲဒီနောက် Edit>Paste ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Screen လေးရသွားပြီ။ Save လုပ်ပြီးသိမ်းလိုက်ပေါ့။ OK?[URL="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tun%20Tun/Desktop/Sample.bmp"][/URL]
ကို Phoenix မှားနေပြီဗျ Screen shot က Alt + Print Screen မဟုတ်ဘူးဗျ။ win + Print Screen ပါ။ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။
Screen shot ဖမ်းပုံလေးက ကိုယ် လိုချင်တဲ့ Screen ကိုဖွင့်ပြီး Alt + Print Screen ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကို တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Accessories ထဲက Paint ကို ဖွင့်လိုက်နော်။ အဲဒီနောက် Edit>Paste ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Screen လေးရသွားပြီ။ Save လုပ်ပြီးသိမ်းလိုက်ပေါ့။ OK?
brother ရေ srceen shot တော့လုပ်ပြီးသွားပြီ
ဒါပေမယ့် ဒီပေါ်ဘယ်လိုတင်ရမှန်း မသိဘူး:((
dar so yin kaspersky 7.0 tin pee yin
latest update loat.
pee yin scan lite. Kaspersky ka virus taw taw myar myar naing tal.
virus see yin reply lite. dan tan tan
ကက်စပါ လည်း တင်လို့မရပါ ဒန်တန်တန်
kaspersky တင်လို့မရတာက အရင်ကကော တင်ဖူးပါလား
တင်ဖူးရင် unistall လုပ်သေးလား
လုပ်လိုက်ရင် လုပ်တုန်းက ဖိုင်တွေ ကျန်နေတတ်ပါတယ်
advence unistall ဆိုတဲ့ software လေးတွေသုံးကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်